Dwumadzi Bi A Wɔdze Faa Intanɛt Do Kɔr Mbea Ahorow
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kabyle Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Krio Latvian Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mfantse Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Thai Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Valencian Vezo Wallisian Welsh Xhosa Zulu
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania yɛɛ hɔn afrenhyia nhyiamu a otsĩa 129 wɔ Memenda, October 5, 2013 mu. Nyimpa a hɔn dodow yɛ 257,294 na wofi aman 21 do kɔr dwumadzi no ase anaa wɔhwɛe wɔ Intanɛt do. Da a odzi hɔ no, woyii dwumadzi no dɛ video maa Adasefo afofor hwɛɛ bi. Sɛ wɔka ne nyina bɔ mu a, nna etsiefo no hɔn dodow yɛ 1,413,676, na wofi aman 31 do. Dze besi seseiara a yɛrekasa yi, afrenhyia nhyiamu yi yɛ nhyiamu kɛse a ɔkyɛn biara a Jehovah Adasefo ayɛ, na etsiefo no hɔn dodow no bor etsiefo 1,327,704 a wɔhwɛɛ dwumadzi soronko a wɔyɛe wɔ Mexico nye Central America wɔ April 28, 2013 mu no do.
Ofitsi afe 1920 reba no, Jehovah Adasefo dze ehyiadzi ahorow a wɔyɛ no fa tɛlɛfon nye radio do dze kɔ aman ahorow do ma etsiefo a wɔwɔ hɔ no nya mu kyɛfa. Seseiara dze, abaɛfor Intanɛt adaworom ntsi, etsiefo a wɔwɔ mbea a atsew no ho mpo tum hwɛ dwumadzi ahorow a ɔtsetse dɛm ber a dwumadzi no rokɔ do no anaa ber a woewie dwumadzi no. William yɛ Jehovah Adasefo no mu kor wɔ United States. Afe 1942 mu no, ɔkɔr ehyiadzi wɔ Richmond, Virginia, na otsiee dwumadzi no nyina wɔ tɛlɛfon do. Ber a ɔdze iyi rototo afrenhyia nhyiamu a wɔyɛe wɔ afe yi mu no ho no, dza ɔkãe nye dɛ: “Sɛ inya ho kwan hwɛ dwumadzi no ankasa a, inya do mfaso kɛsenara. Irunntum mmfa biribiara nntoto iyi ho.”
Edwumayɛfo a wɔwɔ Jehovah Adasefo edwumayɛbea ahorow no dze afe nye no mboree yɛɛ Intanɛt no ho edwuma. Ndɔnhwer mpempem pii na wɔdze yɛɛ edwuma no nyina wiei. Memenda a nna wɔdze dwumadzi no bɛfa Intanɛt do no, hɔn a wɔwɔ Intanɛt ho nyimdzee no tsenaa dan bi mu wɔ da no mu nyina wɔ Brooklyn, New York, kyinkyiim mfir no no mfunuma. Woyii dwumadzi no wɔ mbea 15 a hɔn ndɔnhwer gu ahorow mu. Ryan kã hɔn a wɔhyehyɛɛ Intanɛt ho mfir no na wɔbɔɔ ho ban no ho. Ɔkãa dɛ, “Nda a wɔfrɛ no nda, bi mpo anntɔ hɛn enyi do. Nyimpa dodow a wonyaa dwumadzi no do mfaso no maa yehun dɛ hɛn fona annyɛ gyan.”
Mbrɛ Intanɛt No Si Yɛ Edwuma
Wɔdze camera ahorow twa dwumadzi no, na iyi ekyir no wɔdze ma efir bi a wɔfrɛ no mixer. Dɛm efir yi boa ma wotum san mu yi video a ɔyɛ fɛw yie, na wɔaada no edzi. Dza odzi hɔ no, wɔdze video a wɔasan mu eyi no kɔ dan a wokyinkyim mfir no no mfunuma wɔ mu no mu. Dɛm dan yi mu na wɔyɛ video a wɔdze bɛfa Intanɛt do no ho resolution. Wɔyɛ bi ma ɔyɛ dza ɔwɔ famu, adantamu, nye dza ɔwɔ sor.
Wɔdze video a wɔayɛ no gu kɔmpiwta do. Kɔmpiwta no kyekyɛ mu ma ɔyɛ afã ahorow a no mu biara tsentsen yɛ enyibu du. Iyinom na wɔdze bɛfa Intanɛt do no. Wɔdze efir bi twe video no wɔ Intanɛt do wɔ mbea ahorow a atsew no ho no, efir no kekã video no sisi enyim ma wotum hwɛ video no a biribiara nntwitwa hɔn akwan mu. Dɛm nhyehyɛɛ yi ma dwumadzi a etsiefo no rohwɛ no ka ekyir ofitsi enyibu 30 kesi enyibu 60.
Na sɛ Intanɛt no kekã no ho dɛ akyekyerɛ so ɛ? Efir a wɔdze twe video no bɛfa video a ne resolution no wɔ famu mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɔkɔ do ahwɛ dwumadzi no. Sɛ Intanɛt no n’ahoɔdzen no ba sor dɛ ɔtwe ne mbirikatu a, efir no bɛsan afa video a ne resolution no wɔ sor no. Sɛ Intanɛt no tsew kɔ dɛ mframa a, osiandɛ efir no akora video no do wɔ beebi fofor ntsi no, ɔbɔkɔ do eyi dwumadzi no ma etsiefo aahwɛ. Sɛ efir no tum fa video a wɔakora do no ntsɛm a, ɔnnyɛ adze a etsiefo no bohu ara da dɛ nna ndzɛmba nnkɔ yie. Osiandɛ efir no tɔ sin tse dɛ ewuranom a wɔyɛe ntsi, wɔdze ndzɛmba ahorow gugu akwan mu mbrɛ ɔbɛyɛ a wobotum edzi ɔhaw biara a ɔbɔsoɛr ho dwuma.
Dwumadzi No Ho Nsɛm Kakra—Mbea Ahorow A Wɔhwɛɛ No Wɔ Intanɛt Do
Bea Tsitsir: Jehovah Adasefo Ehyiadzi Asa a ɔwɔ Jersey City, New Jersey, U.S.A. Etsiefo: 4,732.
Bea A Nna Etsiefo No Dɔɔ Sõ Yie: Perth, Australia. Etsiefo: 7,186.
Etsifi Afamu: Fairbanks, Alaska, U.S.A. Etsiefo: 255.
Pomu Afamu: Invercargill, New Zealand. Etsiefo: 190.
Bea a nna ɔwɔ ekyir papaapa: Perth, Australia. Ofi Jersey City dze rokɔ hɔ yɛ kilomita bɛyɛ 18,700 (akwansin 11,600).
Wɔrohwɛ dwumadzi no wɔ Katherine, Etsifi Mantɔw Mu, Australia
Afrenhyia Nhyiamu Ho Nsɛntsitsir​—October 2013